Liverpool oo si cad ugu sheegtay Daniel Sturridge in uu janaayo guri kale raadsado | Ciyaarside.com
Liverpool oo si cad ugu sheegtay Daniel Sturridge in uu janaayo guri kale raadsado
Weeraryahanka Liverpool Daniel Sturridge ayaa lagu soo waramayaa inuu indhaha ku hayo inuu ka tago Anfield bisha Janaayo isagoo isku dayaya inuu sii noolaado riyadiisa Koobka Adduunka.
28-jirkaan ayaa loo isticmaali doonaa kaalinta ugu hooseysa ee tababaraha Reds tababaraha Jurgen Klopp maalmahaas, waxaana laga soo bilaabay kursiga keydka 8da kulan ee uu u saftay xilli ciyaareedkan.
Sturridge ayaa ku guuldareystay inuu xitaa in uu bandhig qurxoon ku sameeyo garoonka Liverpool labadii kulan ee ugu dambeysay labadii kulan ee isreebreebka Koobka Adduunka, hase yeeshee, inkastoo laba gool uu ka dhaliyay xagaagan hadana kaalin muuqata ma sameen.
Sida laga soo xigtay The Mirror, ciyaaryahankii hore ee Manchester City iyo Chelsea ayaa haatan doonaya inuu ka tago Merseyside si uu u soo nooleeyo xirfadiisa ciyaareed, meel kale oo uu ka maqan yahay Gareth Southgate oo ka tirsan xulka England.
Southgate ayaa dhowaan sheegay in kaliya uu doonayo inuu ciyaaro kubad joogta ah kubadda cagta si uu usoo daawado Koobka Adduunka xagaaga soo aadan, isla markaana warbixintan ayaa soo jeedineysa in Liverpool ay diyaar u tahay inay dhageysato dalabyada ay ku caawineyso Sturridge. Heshiiska amaahda ayaa sidoo kale laga yaabaa inay labada kooxoodba tixgeliyaan, inkastoo kooxda Merseyside ka dhisan ay la micno tahay inay diidan tahay qaabka la midka ah ee Paris Saint-Germain